चीन PU लेपित कपड़ा निर्माण र कारखाना | जीआशुन
हामीसंग हाम्रा PU कोटेड कपडाहरू हाम्रा मूल्यवान ग्राहकहरूका लागि छन्। पीयू लेपित कपडा एक सिंथेटिक बुने आधार कपडा ज्यादातर पॉलिस्टर वा एक वाटरप्रूफिंग polyurethane कोटिंग को साथ laminate संग नायलॉन सामग्री को ट्रम्प अप छ। पोलीयुरेथेन कोटिंग बेस फेब्रिकको एकल पक्षमा लागू हुन्छ, यसले कपडाको पानी प्रतिरोधी, हल्का तौल र समायोज्य बनाउँदछ। हाम्रो कपडा लग्गेज उद्योग, औद्योगिक झोला, अत्यधिक मौसमको लागि ब्यागहरूमा प्रयोग भइरहेको छ।
32 3732२ + पु
०..45 ± ००२
एक साईड g० ग्राम
एक साईड 40g
6 666 + पु
दुई-सिड १ED० ग्राम
०..6 ± ००२
84 3784 + + पु
०.8 ± ००२
दुई-पक्षीय १ 150० ग्राम
१. अर्डर कसरी गर्ने
१. नमूना अनुमोदन
२. ग्राहकले हाम्रो पीआई प्राप्त गरेपछि .०% निक्षेप वा LC खोल्छ
ग्राहकले हाम्रो नमूना पुष्टि गर्दछ
Cli. ग्राहकले हाम्रो शिपिंग नमूनालाई अनुमोदन गर्दछ
Sh. शिपमेंटको व्यवस्था गर्नुहोस्
Supplier. आपूर्तिकर्ताले आवश्यक कागजात बनाउँदछ
C. क्लाइन्टले शेष रकम भुक्तान गर्दछ
U। आपूर्तिकर्ताले मूल कागजात पठाउँदछ वा टेलेक्सले सामान रिलीज गर्दछ
२. कसरी शिपिंग गर्ने?
हामी एक्सप्रेस शिपिंग, एयर शिपिंग र समुद्री शिपिंग प्रदान गर्न सक्छौं।
एलटी समय के हो?
यो तपाईंको मात्रामा आधारित छ, सामान्यतया ~ ~ ~० दिनहरू।
अघिल्लो: औद्योगिक कपडा
अर्को: मिश्रित सिलिकॉन टेप